ပလပ်စတစ်ကော် 1. ရည်ရွယ်ချက် အိမ်ထောင်စုသည် PVC ပိုက်များကဲ့သို့သော ပလပ်စတစ်ပိုက်များ တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ပလပ်စတစ်ကော်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ပလပ်စတစ်ကော်သည် အတော်လေးပျစ်သည်၊ အရောင်မဲ့ပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်ရပြီး ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပလပ်စတစ်ပိုက်ပလပ်အဆစ်များတွင် ကွက်လပ်များကို ပြင်ဆင်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ရန်ဖြစ်သည်။အသုံးပြုသောအခါတွင်၊ ...
အဓိကအားဖြင့် အိမ်သုံး sealants-styrofoam (၂) ၏ အမျိုးအစားများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။
Styrofoam 1. Purpose Styrofoam သည် မိသားစုတွင်နေ့စဉ်အသုံးပြုသော sealant တစ်မျိုးဖြစ်သည်။တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်ဘောင် နှင့် နံရံကြားရှိ ကွာဟချက်ကို ဖြည့်ရန်နှင့် တံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။နံရံများမှတဆင့် လေအေးပေးစက် ပိုက်လိုင်းများကို ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ အပူပေးခြင်းစသည့် အပေါက်ငယ်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း...
အဓိကအားဖြင့် အိမ်သုံး sealants အမျိုးအစားများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ-Glass glue (1)
Sealant သည် ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော အလုံပိတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မော်တော်ကား၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။အောက်တွင်၊ အိမ်သုံး sealants အမျိုးအစားများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်း အဓိကအားဖြင့် ဆွေးနွေးပါသည်။ပင်လယ်...
ဗီရိုရဲ့ လျှောတံခါးကို ဘယ်လိုကပ်ရမလဲ။
ဗီရို၏လျှောတံခါး၏ထိပ်ပိုင်းတပ်ဆင်မှုအနေအထားသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တံခါးရွက်၊ ဖရိန်ပန်ကာတစ်ဝိုက် သို့မဟုတ် ဘောင်နှင့်ပန်ကာကြားတွင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အလုံပိတ်တံတား (လေတိုက်ခြင်း) တွင်ဖြစ်သည်။အပေါ်ပိုင်း၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် ရေစိုခံမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေမည့် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
ဗီရိုလျှောတံခါးအပေါ်ပိုင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ။ဗီရို လျှောတံခါးထိပ်ကို ကပ်နည်း Sliding door ဗီရိုများသည် ၎င်းတို့၏ခေတ်ဆန်သောအသွင်အပြင်နှင့် ပေါ့ပါးစွာအသုံးပြုမှုဖြင့် စားသုံးသူများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်လာပါသည်။ ဗီရိုစလိုက်တံခါးပေါ်တွင် သေးငယ်သောအရာတစ်ခုရှိသည်၊ မရှိလျှင် အများအားဖြင့် မမြင်ရပေ...
တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ ဘုံစတိုင်ငါးခု
1.Basic entry- မြင့်မားသော elasticity နှင့် high density tops အထူးချည်၊ မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိ-အရည်အသွေးမြင့် fluff အထူးလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော elasticity အပြည့်၊ လေတိုက်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောရွေးချယ်မှု။2.Sealed အဆင့်မြှင့်ခြင်း- မြင့်မားသော elastic plus ထိပ် အထူးချည်၊ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော...
တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်တံဆိပ်ခတ် strips တွေ၏အခန်းကဏ္ဍ
ညစ်ညမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး အခန်းအတွင်းရှိ ဖုန်မှုန့်များအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်တော့ပါ။Sound insulation anti-sound. အသံဆူညံမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကလေးသည် သဘာဝအတိုင်း နိုးလာနိုင်ပါသည်။Anti-insert ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများ၏ လေလုံမှုကို အဆင့်မြှင့်ထားပြီး ခြင်များသည် ချောမွေ့စွာ မတူးနိုင်တော့ပါ။ယာဉ်တိုက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး အဖွင့်အပိတ် သက်ရောက်မှု...
ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သိုးမွေးချည်နှောင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည့် PP ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အချွန်အတက်များကို သိုးမွှေးချည်နှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သိုးမွှေးချည်မျှင်များအဖြစ် ပြုပြင်ပြီး သိုးမွှေးအဖြစ်သို့ လည်ပတ်ကြသည်။ထိပ်ကို ပေါင်းပြီး ကျစ်ဆံမြီးများ ချည်နှောင်ခြင်းသည် သိုးမွှေးချည်နှောင်ခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် carding၊ sliverin...
ရာသီဥတုက သာမန်ဘဝရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ပြုပြင်ထားသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ- ဖုန်းအောက်ခြေကဲ့သို့သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၏အောက်ခြေတွင်၊ ချော်လဲခြင်းမှကာကွယ်ရန် တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များအတွက် မိုးလေဝသအပိုင်းအစလေးတစ်ပိုင်းကို ကပ်ထားသည်။ထုပ်ပိုးကိရိယာလက်ကိုင်- တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်မိုးကာအဖုံး၊ ရာသီဥတုဒဏ်ချက်များ၊ ဘုံ...
Weather strips များသည် ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများ၊ အိမ်ဖုံးများနှင့် တင်းကျပ်စွာ အလုံပိတ်ရန်လိုအပ်သည့် အခြားနေရာများအနီးရှိ အပေါက်ငယ်များကို တံဆိပ်ခတ်ရန် အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် အေးဂျင့်များကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။အခြေခံအားဖြင့်၊ weather strip ၏ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ အတွင်းပိုင်းနေရာမှ လေ၀င်လေထွက်အား ဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကော်၏ အဓိက ကန့်သတ်ဘောင်သုံးခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်- အလုပ်ဘဝ (သို့မဟုတ် နှစ်ခုကြားရှိအချိန်)။ကော်ကို ရောစပ်ပြီး အဆစ်ကိုပိတ်ရန်)၊ ခွန်အားကို ကိုင်တွယ်ရန်အချိန် (နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ကော်ကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သောအချိန်) နှင့် နောက်ဆုံး နှပ်ထားသောအချိန်။